Search Term: ကင်ဆာ , 36 results have been searched, Search time: 0.015 seconds , Sorting Option: Match level Published Date Subject Title Author Call No. Borrowed Times Renewal Times Volume No. Sort by: Desc Asc Hide Navigation | Hide trend diagram
NL Yangon (23)
ကျန်းမာရေး -သုတ (2)
ဆေးလိပ် ဆေးရွက်ကြီး (2)
ကင်ဆာ-မြန်မာနိုင်ငံ ;ရင်သားကင်ဆာ; အသည်းကင်ဆာ (1)
ကင်ဆာရောဂါ; အစာအာဟာရနှင့်ကျန်းမာရေး (1)
ကင်ဆာရောဂါ၊ သင်္ဘောရွက် (1)
ကုထုံး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ (1)
ကျန်းမာရေးကာကွယ်ခြင်း; ကျန်းမာရေးပညာပေး (1)
နာတာရှည်ရောဂါ၊ အသည်းနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါများ၊ သဘာ၀ဆေးပင်များ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၊ ၀မ်းလျှော၀မ်းပျက်ရောဂါ၊ ၀မ်းကိုက်ရောဂါ၊ အူတွင်းရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်၊ ကင်ဆာ၊ မီးယပ်၊ စိတ်ရောဂါ၊ အရေပြားရောဂါ၊ လေးဖက်နာရောဂါ၊ အရိုးနှင့်အဆစ်ရောင်ရောဂါ၊ ဆံပင်နှင့်အရေပြားရောဂါ (1)
မြန်မာတိုင်းရင်းဆေး; တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးပညာ (1)
ဂျော်နီဖရန်ကယ် ကယ်ဗင် (2)
လက်စလီဘီ တိုင်စွပ် (2)
လှမြင့် ၊ ဦး (ဂန္ဓမာ) (2)
ဦးလှမြင့် (ဂန္ဓမာ) (2)
ရွှန်း၊ နီဗီလီ ဘာသာပြန်သူ-ကျော်သက်ခိုင်(ဆေးတက္ကသိုလ်) (1)
ကိုဦး (သတ္တဗေဒ) (1)
ကျော်စိန်၊ ဒေါက်တာ (ပန်းဘဲတန်း) (1)
ကျော်စိန်၊ ဒေါက်တာ(ပန်းဘဲတန်း) (1)
ခင်နွယ်ဝင်း၊ ဒေါက်တာ၊ မြန်မာပြန်သူ (1)
ဂျင်းလမန်တီးရာနှင့်ဒေါက်တာနေးလ်ဘရင်းစတင်း၊ မြန်မာပြန်သူ ဒေါက်တာအေးမြအောင် (1)
ဂျိုဟန်းနာဘရန့်၊ မြန်မာပြန်သူ နေထွန်း (1)
စိုးခိုင် ၊ ဒေါက်တာ (1)
စိုးထိုက်၊ မောင်၊ (သုံးဆယ်) (1)
More than 180 days (33)
Total4pages First Page <Prev 1234Next > Last Page>>
Author: အောင်နိုင်၊ ဦး၊ ဆရာ
Publisher: မြတ်မျိုးမြန်မာစာပေ Published Date: 2015
Literature Type: Books , Call No.: ၆၁၃.၂ အောင် ၂၀၁၅/၇၅၇
ကင်ဆာဆိုသော်လည်းအသက်မတို: ဦးလှထွန်းမေတ္တာရိပ်မွန်(ကင်ဆာ)ဖောင်ဒေးရှင်းအတွင်းလူနာ(ကင်ဆာ)ဗဟို-ရန်ကုန်(၁၀)နှစ်ပြည့်အမှတ်တရများ Ordering
Author: စိုးထိုက်၊ မောင်၊ (သုံးဆယ်)
Publisher: အမေ့သားထိုက်စာပေ Published Date: 2008
Literature Type: Books , Call No.: 900 စိုး ၂၀၀၈/၂၅၂၇
ဆီးချို၊ ကင်ဆာ၊ အသည်းရောဂါများနှင့် အသက်ကယ်သော ဆေးပင်များ Ordering
Publisher: ဇင်ရတနာစောစာပေ Published Date: ၂၀၁၁
Author: ထွန်းဝင်း၊ ဒေါက်တာ
Publisher: စွယ်တော်စာပေ Published Date: 2014
Literature Type: Books , Call No.: ၆၁၆.၉၉၄ ထွန်း ၂၀၁၄/၂၁၀၃
Author: လက်စလီဘီ တိုင်စွပ်
Publisher: တူဒေးစာအုပ်တိုက် Published Date: 2011
Literature Type: Books , Call No.: ၆၁၆.၉၉၄ သန်း ၂၀၁၁/၂၀၃၀
Literature Type: Books , Call No.: ၆၁၆.၉၉၄ သန်း ၂၀၁၁/၂၀၃၁
Author: အေးကျော်၊ ဒေါက်တာ
Publisher: လာဘ်မွေးဆွေစာပေ Published Date: 212
Literature Type: Books , Call No.: ၆၁၆.၉၉၄ အေး ၂၀၁၂/၁၄၄၄
စည်းမထိုး၊ကြွေမပစ်၊ပဏ္ဍာမဆက်သို့သော်နိုင်သည်: ကျွန်တော်နှင့်ကင်ဆာဆောင်းပါးများစုစည်းမှု Ordering
Publisher: သီဟရတနာစာပေ Published Date: 2010
Literature Type: Books , Call No.: ၆၀၀ မိုး ၂၀၁၀/၄၁၆၆
Author: ကျော်စိန်၊ ဒေါက်တာ(ပန်းဘဲတန်း)
Publisher: အောက်ပိုင်မင်းစာပေ Published Date: 2007
Literature Type: Books , Call No.: 600 ကျော် ၂၀၀၇/၃၀၂၃
Author: ကျော်စိန်၊ ဒေါက်တာ (ပန်းဘဲတန်း)
Literature Type: Books , Call No.: 600 ကျော် ၂၀၀၇/၃၀၂၄